Sulultaatti weerara lafaa fi ijaarsa seeran alaa dhaabsisuuf hojjechaa jirra- aadde Roozaa Umar – Fana Broadcasting Corporate
Sulultaatti weerara lafaa fi ijaarsa seeran alaa dhaabsisuuf hojjechaa jirra- aadde Roozaa Umar
Finfinnee, Bitootessa 7,2011(FBC)- Godina Addaa Oromiyaa Naannawa Finfinneetti Bulchiinsi Magaalaa Sulultaa weerara lafaa fi ijaarsa seeran alaa dhaabsisuuf hojjechaa jiraachuu beeksise.
Kantiibaan magaalaa Sulultaa aadde Roozaa Uumar akka ibsanitti, lafa qonnaan bultootaa, mootummaa, lafa waliinii fi invastimantiidhaf beenyaan itti kaffalamee jiru irratti weerarrii, saamichii fi ijaarsi seeraan alaa raawwatameera.
Rakkoon kun qonnaan bultoonnillee lafasaanirraa akka buqqa’an taasiseera jedhu jiraattonni.
Rakkoon kunis furmaata akka argatu ummanni magaalichaa komii qabu mootummaatti dhiheeffachaa tureera.
Lafti mootummaa, eddoowwan magariisummaa, eddoowwan gabaa ummataa, lafti invastimantiif beenyaan itti kaffalamee fi lafti bosonaa weeraraan qabameera.
Qonnaan bultoonni dhiibbaa faddaaltotaa fi kiraa sassaabdonni caasaa mootummaa sadarkaa adda addaa jiran irraan gahaniin lafasaanirraa gatii gadi aanadhaan dhabanii hiyyummaaf saaxilamaniiru.
Kanaaf ammoo bu’uuraalee misoomaa kanneen akka daandii, bishaan, dhaabbilee barnootaa fi fayyaa diriirsuun rakkoo ta’eera jedhaniiru aadde Roozaan.
Mootummaan naannoo Oromiyaa komiiwwan ummataa haaromsa gadi fagoo keessatti adda baafatee furuuf waadaa gale keessaa tokko dhimmoota bulchiinsa gaaritiin walqabatan keessaa isa duraa ta’uu Biiroon Dhimmoota Koominikeeshinii Mootummaa Naannoo Oromiyaa beeksiseera.
Bu’uuruma kanaan bulchiinsi magaala Sulultaa weerara, saamichaa fi ijaarsa seeraan alaa kana dhaabsisuuf olaantummaa seeraa kabachiisuuf hawaasa magaalichaa fi qonnaan bultoota naannawa magaalichaa jiran waliin yeroo adda addaa marii taasisuun furmaata soqaa akka ture kantiibaan bulchiinsa magaalichaa aadde Roozaa Umar ibsaniiru.
Akka ibsa aadde Roozaatti, plaanii magaalichaa cabsuun weeraraa fi seeraan alummaa lafa mootummaa fi ummataarratti babal’achaa ture eddo jirutti dhaabsisuuf tarkaanfiin akka fudhatamu qophiin barbaachisaa ta’e xumurameera.
Hawaasni magaalichaas marii yeroo adda addaatti geggeeffamaa tureen tarkaanfii fudhatamu kana akka deeggaran waliigalteerra gahameera jedhan.
Manneen seeran alaa ijaaraman hojiin adda baasuu waggaa tokkoof kan raawwatamaa ture yemmuu ta’u, namoota gocha kanarratti hirmaatanis akka dhaaban gorsi kennamaa turuu, kanneen seeraan ala ijaarsa lafa mootummaa, lafa invastimantiif beenyaan itti kaffalame, eddoowwan magariisaa, daandii cufamee fi bosona keessatti ijaarsa raawwatan akka irraa diiggatan, kanneen ragaa qaban ammoo ragaasaanii akka dhiheeffatanii seera qabeessa taasifatan itti himamaa turuu adde Roozaan himaniiru.
Namoonni qabeenya isaaniirratti mirga qabanis adda baafamee seera ragaan abbaa qabeenyummaa kennamaafii turuus iban.
Yeroo ammaa namoonni ragaa hin qabne ammoo qabeenyasaanii akka kaafatan yeroon dabalataa torban tokkoof kennameefi jira jedhaniiru.
Hangasitti namni ani ragaa seera qabeessan qaba jedhu bulchiisa magaalichaatti akka dhiyeeffachuu danda’anis himanii, kana booda olaantummaa seeraa kabachiisuun kan eegalu ta’uu hubachiisaniiru.
Gama biraatin maqa balleessiin sabaa fi amantaa dawoo godhachuun miidiyaalee adda addaatin afaarfamaa jiru bu’aa akka hin qabnes akeekkachiisanii, olaantummaa seeraa kabachiisuuf hundinuu gaheesaanii bahuu akka qabanis dhaamaniiru.
Maddi; Biiroo Dhimmoota Koominikeeshinii Mootummaa Naannoo Oromiyaa